I-BitCAD, i-AutoCAD engabizi kakhulu-iGeofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/I-BitCAD, i-AutoCAD engabizi
I-BitCAD, i-AutoCAD engabizi
I-BitCAD yenye yeendlela ezininzi eziphuma kwiNkqubo ye-IntelliCAD, evumela ukuba ube nesixhobo se-CAD, nje nge-AutoCAD esebenzayo, kodwa ngexabiso eliphantsi.
IntelliCAD Yayinhlangano eyakhayo ye-Open Design Alliance, eyadalwa ukukhuthaza indawo yendalo eyenziwe ngekhompyutheni enefuthe eliphambili lokunyanzelisa i-AutoDesk ukuqalisa i-AutoCAD Lite ukuze khu phiswano en xabiso. Iinkampani ezinxulumene ne-IntelliCAD zihlawula ilungelo lokufikelela kumathala eencwadi ophuhliso kwaye zingathengisa iimveliso ezizivelisayo, ezikhoyo lonke uluhlu ukukhetha phakathi kwabo eBricscad, eCADopia, BitCAD, I-CADian, progeCAD, i-MicroSurvey CAD ne-IntelliDesk.
Okwangoku, i-Brics, umcebisi BitCAD uzalisekisa iqhinga lokuthengisa eliyile kakhulu. Siyakholelwa ukuba kumazwe aseSpanishi apho amaziko amaninzi egxeka iindleko eziphezulu zesoftware yorhwebo, olu hlobo lwezisombululo kufuneka lukhuthazwe, olubiza i-315 Euro kodwa phantse ngayo yonke imisebenzi ye-AutoCAD.
Sihamba ubuncinane iimpawu ezintathu:
Kulula ukusebenzisa indawo
Phantse zonke izisombululo eziphuma kwi-psyCAD ziphethe indawo yokusebenza efanayo, imiyalelo yelayini, ibhloko yethala leencwadi, iifonti ze-shx, iindlela ze-AutoLisp kunye nefomathi ye-dwg yemveli yokusebenza kwisitayile se-AutoCAD. Oku kuhle kakhulu njengoko kuvumela ijika lokufunda labasebenzisi abaqhelekileyo ngesoftware ye-CAD eyaziwayo kwihlabathi liphela ukuba lifutshane.
Ixabiso elingcono kwaye libhetele kune-AutoCAD Lite
Kumasipala okanye ishishini elincinci okanye amaziko oqeqesho, endaweni yokusebenzisa iphepha-mvume lokuthengisa iipirate, isisombululo esinjengeBitCAD singcono kuba siya kukunika imisebenzi efunekayo ngexabiso eliphantsi ... nditsho nakubasebenzisi abafuna ixesha lobomi ukusuka apho khuphela mahala AutoCAD.
Phakathi izinto kakuhle phezu AutoCAD Lite ithuba mvume ezidadayo, 3D bume, ophawulwe nge yonke dwg version evela 2.5, kungenzeka yeefomati asakhasayo, ixhasa AutoLisp, preview block ActiveX kunye umhleli ezihlangeneyo, phakathi kwabanye.
Inkxaso kunye nokuzinza
Nangona kukho izixhobo ze-CAD zamahhala, inzuzo ye-BitCAD kukuba inenkampani ejongene nokuzinza kwayo. Ngoko, ngaphandle kwelayisenisi, unokuthenga iinkonzo zenkxaso ngeSpanish.
Kwaye ukuba umntu unomdla kwiBitCAD, nantsi le mibuzo edla rhoqo:
1 Ngaba ungasebenzisa iiphilisi ze digitizer nge BitCAD IntelliCAD V6?
2 Ngaba ndingangenisa iiposos okanye iifoto kwiifom ezifana ne-BMP, JPG, njalo njalo?
3 Ndiyakwazi ukusebenzisa iibhloko kunye neempawu kwi-BitCAD IntelliCAD V6?
4 Imimandla ye-Model Space kunye nePap Space Space iyafana naleyo ye-AutoCAD®?
5 Ukuhambelana neeprototypes kunye neefayile zoqwalaselo
6 Ndiye ndisebenza iminyaka emininzi kunye nocwangciso lwam PGP.
7 Ngaba iifayile ze-PLT zingaveliswa?
8 Ngaba ndingasebenzisa amamenyu ambalwa?
9 Ngaba unako ukwenza u-Autolisp?
10 Ukuba i-BitCAD IntelliCAD V6 inamandla, kutheni i-10 ibiza indleko ngaphantsi kwe-AutoCAD®?
11 Ingaba i-BitCAD IntelliCAD V6 isebenza kunye nabacebisi ngaphezu kwiprinta?
12 Ngaba siziko leMfundo, ngaba kufuneka sifundise abafundi beCAD?
13 Ngaba iskrini somsebenzi weB BitCAD IntelliCAD V6 ingaba yatshintshwa?
14 Ukuhambelana nemigangatho yemarike
15 Isisombululo esipheleleyo kwiinkampani.
16 Ukucwangciswa okuncinane nokucetyiswayo.
17 Ngaba ziza kuba neengxaki ezisebenza kwindawo yintsebenziswano kunye neBitCAD kunye ne-AutoCAD?
18 Ngaba i-BitCAD IntelliCAD V6 efana ne-AutoCAD® LT?
19 Ngaba izitayela zomlinganiselo eziqukethe umzobo zigcina umzobo kwiBitCAD?
20 Ngaba i-BitCAD IntelliCAD V6 iyahambelana nemifanekiso yam yangoku eyenziwe kwi-AutoCAD®?
21 Andifuni ukuchitha ixesha okanye imali ezama ukufunda isofthiwe entsha ye-CAD
Ngomhla ebomini beGeofumadas
Izifundo ze-7 zamahhala ezisebenzayo
I-Autodesk ityhila "Igumbi elikhulu" leeNgcali zoKwakha
Ukongezwa okutsha kuthotho lwezinto zeZiko lePortugal: ngaphakathi kwi-MicroStation ConNECT Edition
I-AulaGEO, eyona khosi intle inikezela ngeengcali ze-Geo zobunjineli
I-Plex.Earth Ixesha lokujonga ukubonelela ngeengcali ze-AEC ngemifanekiso ye-satellite yamva nje kwi-AutoCAD
IBitCAD ayihlawulelwa. Ihlawulwe.
Ndinqwenela ukuba ndingayifumana le nkqubo simahla. Ngoku ndisebenzisa i-bitcad 6.4 kodwa ineebugs, nangona iyinkqubo ebalaseleyo. Kungenxa yoko le nto ndingathanda ukufumana i-bitcad 7 simahla ... ngaba ikhona indlela yokuyifumana?
UCarlos Castillo uthi:
Amava am neBitCAD ayikabi. Ndaqala ukusabalalisa kwaye kwafuneka ndibuyise imali kwaye ndayifumana ihafu yeBricsnet. Ndishiya ukusasazwa ngenxa yokuba ezinye iingxaki ezilula ngokwenene zixhobo azizange zixazululwe:
1 Zoom kakhulu
2. Ukungakwazi ukulandelela kwiifayile ezikhankanyiweyo
3. Utshintshile amafonti xa ufaka kwi-AutoCAD
4. Yayivalelwe kwimizuzu yonke eneefayile ezikhanyayo
5. Isebe lobugcisa alinakuyicombulula iingxaki zomnye wabaxumi bam ngolu hlobo ngasentla.
Kwaye, phantse iziphene ze-50 zidweliswe, ininzi yazo njengento eyisiseko njengendlela yokunciphisa ngokukhawuleza eyenza inkqubo ingasebenzi.
Iikholeji zeNgcaciso ze-AutoCAD - Ukusuka kwi-Data Station
Ikhosi yeNkqubo yoLwazi lweJografi ngeQGIS
Funda ukusebenzisa i-QGIS ngokusebenzisa iiNkqubo zoLwazi lweJografi usebenzisa iQGIS. -Olo lonke uhlobo lomsebenzi ...